तपाईंले किन ई-कमर्स सुरु गर्नु पर्छ? Semalt बाट asons कारणहरू
जुन किसिमको व्यवसाय तपाईले सुरू गर्न खोज्नु भएको ई-वाणिज्य एक क्षेत्र हो जुनसँग असंख्य अवसरहरू छन्। इ-कमर्स एक सरल क्षेत्र हो जुन शुरुवातकर्ताहरूले पनि अपरेट गर्न सक्दछन्। केही सरल उपकरणहरू र स्रोतहरूले ई-वाणिज्य प्रक्रियालाई यो सरल हुन सक्षम गर्दछ। यी धेरैजसो डिजिटल मार्केटिंग उपकरणहरू नि: शुल्क छैनन्, तर बजारमा नि: शुल्क सुरुवात पनि छ। ई-कमर्ससँग काम गर्ने क्रममा सब भन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कामको नैतिकता राख्नु हो र थकावट बिना काम गर्नु हो।
इ-कमर्स मा धेरै प्रक्रिया शामिल छ। धेरै जसो तपाइँको ब्रान्डको लागि बलियो अनलाइन उपस्थिति बनाउँदछ, विशेष गरी एसईओ। त्यहाँ धेरै कारणहरू छन् जुन एकले इ-कमर्स व्यवसाय सुरु गर्न सक्दछ।
ओलिभर किंग, Semalt डिजिटल सेवाहरूको ग्राहक सफलता प्रबन्धक, e- वाणिज्य व्यवसाय मा अनुभव प्राप्त गरेको छ र तपाईंलाई एक सुरु गर्न नेतृत्व गर्न सक्ने कारण साझा गर्न को लागी तयार छ।
१. ई-वाणिज्य द्रुत रूपमा बढ्दैछ।
कुनै पनि व्यवसायको लागि मार्केटि strategy रणनीति छनौट गर्दा, बजार प्रवृत्तिहरूको विश्लेषण गर्नु फाइदाजनक छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा २०१eसम्ममा ई-वाणिज्य १ by% सम्म बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। विश्वव्यापी रूपमा ई-कमर्स १.6 ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढीको हुने अनुमान छ। इ-मार्केटरले २. tr खरब डलरसम्मको वृद्धि अनुमान गरेको छ। इ-कमर्स अनन्त बजार सम्भावनाहरू प्राप्त गर्नका लागि उत्तम स्थान हो। अन्य अध्ययनले देखायो कि संसारको population०% जनसंख्या करीव छ वा अनलाइन बिक्री बनाउने छ। उद्यमीहरू यी बजार सम्भावनाहरू प्राप्त गर्न ई-वाणिज्यमा प्रवेश गरिरहेका छन्।
२. तपाईं निदाउँदा तपाईं कमाउन सक्नुहुन्छ।
ई-वाणिज्य मा, एक अनलाइन स्टोर सेट अप एक वास्तविक भौतिक पसल खोल्न संग समान प्रभाव छ। व्यापार गर्ने क्रममा, बहुविध वेबसाइटहरूको अर्थ विभिन्न स्टोरहरू हुनसक्दछन्, जसले विश्वभरिबाट शपरहरू प्राप्त गर्दछ। इ-कमर्स मा राम्रो कुरा के तपाईं काम छैन। व्यापार आफ्नै अफ्नो, पूर्ण अफलाईनमा चल्न सक्छ। ई-वाणिज्य विज्ञहरु विश्वव्यापी लाखौं ग्राहकहरु सम्म पुग्न सक्दछ केवल एक एसईओ ब्लग पोष्ट वा सोशल मिडिया पोष्टको साथ। व्यक्तिहरूले उपलब्ध टेक्नोलोजीको फाइदा उठाई इ-कमर्स मार्फत असक्रिय आय बनाउन सक्दछन्।
Get. यो उठ्न र चलाउन सजिलो छ।
ई-कमर्ससँग धेरै उपकरणहरू छन् जुन प्राय प्रक्रियाहरू स्वचालित गर्न सक्दछ। उदाहरण को लागी, वेबसाइटहरू, अनुप्रयोगहरू, SEO स्वचालन, र खोजशब्द पत्ता लगाउने काम लगभग सबैले ड्र्याग र ड्रप प्रक्रियाहरूका साथ गर्न सकिन्छ। बुटस्ट्र्याप जस्ता संसाधनहरू ठूलो संख्यामा अनलाइन उपलब्ध छन्। ई-वाणिज्य व्यवसाय स्थापना को सब भन्दा गाह्रो हिस्सा एक उत्पादन र आला छान्नु हो। जब यी दुई उपलब्ध हुन्छन्, सम्पूर्ण प्रक्रिया सीधा हुन्छ विशेष गरी तपाई शीर्षकहरूमा जोशिलो हुनुहुन्छ। यसबाहेक, तपाइँलाई अधिक र अधिक केहि केहि गर्न तपाइँको कौशल वृद्धि गर्दछ।
Many. धेरै ग्राहकहरूलाई बढी बिक्री गर्न सम्भव छ।
ई-वाणिज्य को विश्वव्यापी लाखौं ग्राहकहरु सम्म पुग्ने क्षमता छ। त्यहाँ धेरै उपकरणहरू छन् जसले एक वृद्धि रूपान्तरण सक्षम गर्दछ, आगन्तुकबाट बढी ग्राहक बनाउँछ। उदाहरण को लागी, शक्तिशाली उपकरणहरू जस्तै कार्टबुक। व्यक्तिहरूले सामग्री मार्केटिंग र SEO गरेका छन् जसले धेरै पाठकहरूलाई धेरै ब्लगहरू, उत्पादनहरू, र सोशल मिडिया सामग्रीहरू पछ्याउँदछ। ई-वाणिज्य, त्यसकारण, असीम सम्भावनाको साथ क्षेत्र हुनसक्दछ जब यो उत्पादनको बिक्री मूल्यमा आउँदछ।
एक सफल ई-वाणिज्य व्यवसाय शुरू भएको कम्पनीको लागि ठूलो फाइदाको हुन सक्छ। उदाहरण को लागी, ई-वाणिज्य रूपान्तरण को माध्यम बाट बिक्री मूल्य वृद्धि गर्न सक्दछ। अन्य अवस्थाहरूमा, सफल ई-कमर्स प्लेटफर्मको साथ कम्पनीहरू इच्छुक व्यक्तिको लागि बेच्न सकिन्छ। डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफर्मको माध्यमबाट, एकले ठूलो सफलता हासिल गर्न सक्छ विशेष गरी एसईओको साथ चित्रण गरिएको।